Imigomo Yonke Incwadi Yokubhala Ifuna Ukufunda
I-Journalism, njengawuphi na umsebenzi, unesiqendu sayo semigaqo, igalelo layo, ukuba nawuphi na intatheli osebenzayo kufuneka azi ukuba kuthethwa ngabantu abakwi-newsroom. Nantsi ke imiqathango eyi-10 enokuthi uyazi.
Umvuzo ngowesivakalisi sokuqala seendaba ezinzima; isishwankathelo esilandelayo kwinqanaba eliphambili lebali. I-Ledes kufuneka ukuba isivakalisi esinye okanye angabi ngaphezu kwamazwi angama-35 ukuya kuma-40.
Iimpawu ezintle kakhulu zibalaselisa ezibalulekileyo, iinkcukacha eziphathekayo kunye nezinto ezinomdla kwiindaba ezilungileyo , ngelixa ziphuma iinkcukacha zesekondari ezingabandakanywa emva kwebali kwibali.
Iipiramidi ezingaphenduliyo imodeli esetyenziselwa ukuchaza indlela ibali leendaba elihlelwe ngayo. Kuthetha ukuba iindaba ezigqithiseleyo okanye ezibalulekileyo zihamba phezulu kwebali, kwaye iyona nto ibaluleke kakhulu, okanye ibaluleke kakhulu, iya kwizantsi. Njengoko uhamba ukusuka phezulu ukuya ngasezantsi kwebali, ulwazi olunikeziweyo lumele lube luba luleke kangangoko. Ngaloo ndlela, ukuba umhleli ufuna ukunqumla ibali ukuze lilungele indawo ethile, unokunquma ukusuka phantsi ngaphandle kokulahlekelwa nayiphi na inkcazelo ebalulekileyo.
Ikopi nje ibhekisela kumxholo weendaba zendaba. Cinga nje ngegama elinye lomxholo. Ngoko xa sibhekisela kumhleli wekopi , sithetha ngomntu ohlela ibali leendaba.
Ukubetha yindawo ethile okanye isihloko esichazela intatheli.
Kwiphephandaba eliqhelekileyo uya kuba neengxelo zengxelo zenkampani ezithwala izibambo ezifana namapolisa , iinkundla, iholo leedolophu kunye nebhodi yesikolo. Kwimibhobho emikhulu ingabonakala ngakumbi ngakumbi. Amaphepha afana neNew York Times anabalandeli beendaba ezikhuselekileyo zokhuseleko lwelizwe, iNkundla ePhakamileyo, amashishini aphezulu kunye nokunakekelwa kwempilo.
Umgca wegama ligama lomnyatheli obhala ibali leendaba. I-Bylines idla ngokufakwa ekuqaleni kwinqaku.
Idatha yedatha yumuzi apho ibali leendaba livela khona. Oku kufuthi kufakwe ekuqaleni kwinqaku, emva nje komgca. Ukuba ibali linomgca weenkcukacha kunye nomgca wecala, oko kubonisa ngokubanzi ukuba intatheli eyabhala le nqaku yayinokwenene kwisixeko esichazwe kumgca weedata. Kodwa ukuba intatheli ingaphakathi, yitsho, eNew York, kwaye ibhala malunga nesiganeko e-Chicago, kufuneka akhethe phakathi kokuba nomgca wecala kodwa akukho datha, okanye ngokulandelana.
Umthombo nawuphi na udliwano-ndlebe kwiindaba zeendaba. Kwimiba emininzi imithombo ingezantsi-irekhodi, oko kuthetha ukuba zichongiwe ngokupheleleyo, ngegama kunye nesimo, kwinqaku apho baxoxwe ngayo.
Lo ngumthombo ongafuni ukuchongwa kwindaba yeendaba. Abahleli baxhamla ngokusebenzisa imithombo engaziwa kuba ayinakuthenjwa kangangoko kunemithombo yokurekhoda, kodwa ngamanye amaxesha imithombo engaziwa iyimfuneko .
Igalelo lithetha ukuxelela abafundi apho ulwazi kwiindaba ezivela kwiindaba ezivela. Oku kubalulekile kuba abathathi-ntatheli abasoloko bekwazi ukufikelela kubo bonke ulwazi olufunekayo kwibali; kufuneka bathembele kwimithombo, njengamapolisa, abashushisi okanye amanye amagosa ngolwazi.
Oku kubhekisela kwisimboli soNxibelelwano oluNxulumeneyo , oluyifomathi elungeleleneyo kunye nokusetyenziswa kwirekhodi yeendaba zokubhala. I-AP Style ilandelwa ngamaphephandaba amaninzi nakwiwebhusayithi. Unokufunda I-AP Style ye-AP Stylebook.
Iindaba eziNcedo eziBhaliweyo zokuBhala iMigaqo yokuQala uLwazi lweBafundi
Olunye Ulungelelaniso Oluhle Lwabathunywa Beendaba: Qalisa I-ASAP Yokubika
UChrista McAuliffe: Umfundisi wokuqala we-NASA kwi-Space
Impendulo yeenkwenkwezi zeenkwenkwezi 'uPadmé Amidala
Ngubani uMnu Jones eBob Dylan "U-Ballad Wendoda Enhle"
Indlela yokujonga i-Climing Gear yokuGqoka kunye neNyembezi
I-Taurus-Scorpio Moon Node kwiSatifiketi sokuzalwa
Uluhlu olupheleleyo lweeNgqungquthela zeTekisi Wonke umntu kufuneka azi
Ukhokho lukaBarack Obama
Ulwazi malunga neNdawo yokuLondolozwa kweNdalo
Iintlobo ezahlukeneyo zamaRay Rays
I-Congener Inkcazo kunye nemizekelo